GPS Ukuzulazula INDLELA off - Kubuyekeziwe
Umbuzo GPS Ukuzulazula INDLELA off - Kubuyekeziwe
unyaka 1 10 edlule - unyaka 1 8 edlule #521 by Gh0stRider203
Ngiye ngaphawula ukuthi ukwenza lokhu kancane kaningi lapha muva nje. Angikaze ngithintwe ngaphambi 2017 ......
Ungabona ithrekhi Ngithathe engabe ukuthatha ke enyakatho nje yawo, ithrekhi wami ku DFW, bese ithrekhi wami CURRENT ukuba LFRG, enyakatho LOKHO.
Ngisendaweni ukulahlekelwa for kungani ikwenze. Ngezinye izikhathi uzoba fly ithrekhi efanele emuva naphambili izikhathi eminingana ngokuphelele, bese kukhona izikhathi kunjani Hhu! HHAYI nikwenza .....
kokwehla Lwami DFW yayiseduze ephelele. kwesokudla dot, kanye nesilinganiso Uzalo ka -.37 ft / umzuzwana at touchdown (qhubeka .... abe nomhawu lol)
Noma ithole lutho?
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-8 ezedlule Gh0stRider203.
unyaka 1 10 edlule #524 by Dariussssss
Awu, wena zimoshekile okuthile.
Ingabe lutho mayelana umzila silungise, ngemva suka? Mina f wenzile, FSX kuthanda lokudlela up lonke uhlelo lohambo, futhi ngempela ngokuvamile abuyise indiza yokuqala indlela-iphuzu. Noma, kumodi HDG esikhundleni GPS / FMC. Yingakho Ngibheka futhi double uhlole indlela ukuba uqinisekise ukuthi akukho amaphutha noma ezinye ematfuba crazy noma into efana naleyo.
unyaka 1 10 edlule #526 by Gh0stRider203
lol Qha. Angizange ngishintshe into ngaphandle mina ukushintsha kusuka VFR ukuba IFR ngenxa uya khona ukuba IFR futhi ngaleso sikhathi, Ngingumfana kakade ukuxhumana umbhoshongo.
Angihlali futhi ngigqolozele FSX ngesikhathi lezi izindiza eside. Ngenza nezinye izinto, ezifana play Umhlaba yempi (okuyinto ngenzani manje lol)
unyaka 1 10 edlule #527 by Dariussssss
... ngaba ambalwa '' phezu echibini '' izindiza, empeleni umuntu eside kakhulu KPHX-LYBE kanye izindiza kwaba ibala, lapho-ke kufanele kube. Angikwazanga ukwenza yonke indiza ngesikhathi esisodwa, ngakho ngenza kanjalo it in izingxenye ezimbalwa. Ilondolozwe esikhathini esithile futhi baqhubeka lapho mina ukubamba isikhathi esithile. Njengoba ngishilo, kwaba ibala.
Kungenzeka yini ngawe ukungithumelela ukuthi uhlelo lohambo? (FB noma i-imeyili) Ngizozama ukukwenza. Yikuphi izindiza oyisebenzisayo kulena?
unyaka 1 10 edlule #528 by Gh0stRider203
ngokuvamile lena akuyona inkinga ......
Ngenza KDFW - LFRG ku 747-400LCF ngenxa yokuthi kungcono eduze ububanzi max, indlela kahle kulula (uma uthola evulekile 12 lol), futhi ngenxa yalokho, ngenza imali kakhulu VA ngale ndiza .
Ngiye unamathisele ifayela le-zip amapulani 3 ngisebenzisa.
KDFW - LFRG VFR ukuba evulekile 12 & 30, futhi IFR ukuba evulekile 30
Igama lefayela: KDFW-LFRG.zip
Usayizi wefayela: 2 KB
unyaka 1 10 edlule #529 by Dariussssss
KULUNGILE. Ngiyoyenza ethé ukuhluka kancane, nge 747ERF evamile.
Sekuyinto ongaziwa kimi ukwenza indiza enjalo ku VFR ... mhlawumbe lokho lapho iphutha ... Noma kunjalo, mina ngeke ukuyizama.
unyaka 1 10 edlule #531 by Gh0stRider203
99.999% izindiza ami VFR futhi KDFW - LFRG kuyinto umzila kuphela enginalo le nkinga. Angiyithandi IFR. Ngiqonde yini isidingo sokwenza IFR e VFR sezulu, uma nje Gonna khansela noma kunjalo emva Take-off?
unyaka 1 10 edlule #532 by Dariussssss
99.999% izindiza ami IFR, nge ATC, yize kungcono ecasulayo njengendawo yabafileyo, kodwa ngenza konke engingakwenza ukuze uyigcine njengoba namaqiniso ngangokunokwenzeka.
Kusahamba ezinhle, indiza kulungile ithrekhi.
unyaka 1 10 edlule #533 by Gh0stRider203
Ngingathanda ukwenza lokho .... kodwa Ngithanda ukulala Mina ngizoba ake ungeza amahora
Kungani fly kangaka? kahle omunye .... Yilokhu Ngenze kuze kube manje ngo-Ephreli.
Okwesibili, Ngingumfana kuphela flying khona manje VA, futhi okwamanje izindleko zethu $ 961,250 e eqashisa ngamafulethi izinkokhelo ngenyanga 2 Pax izinyoni (kokubili Uyi 777-200LR), kanye no- $ 1,258,334 ngenyanga 2 freighters (747 -800F).
Kuphuma Me ukuqiniseka ukuthi zilethe ngokwanele ngenyanga ngalinye ukuze zimboze ukuthi futhi ukwenza $ kwakudingeka akhokhe zibayise.
unyaka 1 10 edlule - unyaka 1 10 edlule #534 by Gh0stRider203
Ngavele ngenza phezu 300K nm ngenyanga edlule, futhi uNkulunkulu uyazi amahora amaningi indlela lol
Kuba Cishe gonna isenzo kuwe. Akukona njalo ikwenzele Me. Kuba ngokuphelele okungahleliwe
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-10 ezedlule Gh0stRider203.
Isikhathi ukudala page: 0.294 imizuzwana